လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ပါတ်ဝန်းကျင်ခန့်က မိုရေးဗီးယန်းအမျိုးသား လူငယ်နှစ်ယောက်က အနောက်အင်းဒီးစ် ကျွန်းတွေထဲက ကျွန်းကလေးတစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်က ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကျွန်တွေကိုအသုံးပြုပြီး ရာဘာစိုက်ခင်းလုပ်တယ်၊ အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သူဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်တာ ဆိုလို့ဘာမှခွင့်မပြုဘူး၊ တရားဟောခွင့်လည်းမပေးဘူး၊ ဘုရားကျောင်းတည်ခွင့်လည်းမပေးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကိုကြားသိပါတယ်။ အဲဒီ မိုရေးဗီးယန်း လူငယ်နှစ်ယောက်ဟာ အဲဒီကျွန်းပိုင်ဆိုင်သူထံ သူတို့ကိုသူတို့ ကျွန်အဖြစ်နဲ့ ရောင်းပြီးခရစ်တော်ရဲ့ သတင်းကောင်းကို တခါဘူးမျှမကြားသေးသော ကျွန်များထံဝေမျှဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်အဖြစ်နဲ့ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိတဲ့ငွေကိုလည်း အဲဒီကျွန်းကိုသွားရောက်ဖို့ ခရီးစရိတ်အနေနဲ့အသုံးချပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကိုဖြန့်ဝေဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ဘ၀ကို စတေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးများဟာ သဘောင်္ဆိပ်ကမ်းကို ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ဖို့လာကြတဲ့အခါ သူတို့ချစ်တဲ့ သည်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကို တသက်လုံးပြန်ဆုံချင်မှ ဆုံဖြစ်တော့မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်ဆို့နင့် တဲ့ခံစားချက်ကိုယ်စီနဲ့ နောက်ဆုံးသောနှုတ်ဆက်ခြင်း အနေနဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းမှာ မျက်ရည်စက်လက်ငိုကြွေးနေတဲ့ မိခင်နှစ်ဦး အိမ်သူသက်ထားနဲ့ သားသမီးများရဲ့ငိုကြွေးသံများကြား တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွါသွားတဲ့ ရွက်သဘောင်္က လူငယ်တစ်ဦးထံမှ တစ်သက်လုံးအတွက် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံကတော့ “အသက်စတေးခံ သွားတဲ့ သိုးသူငယ်က နာကြင်စွာပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက် ဆုလဒ်များရရှိနိုင်ပါစေ”။ သူဟာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သဘောင်္ပေါ်မတက်ခင်အထိ ဇနီးသည်နဲ့ သားသမီးများထံမှ ခရီးစဉ်ကိုမသွားဖို့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ အသနားခံ တောင်းဆိုခြင်းများကြားမှ ခရစ်တော်အတွက် မီရှင်ခရီးကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်အဖြစ်အပျက်ကလေးကို အခြေခံပြီး မိုရေးဗီးယန်းလူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့မီရှင်နရီ များစေလွှတ်လာ ခဲ့တာ ယနေ့ အယောက်ပေါင်း မှတ်တမ်းအရ ၂၁၅၈ ဦး ရှိပါပြီ။
အပိုဒ်ငယ် ၁၀ – ၁၁ တွင် “သေခြင်းမှထမြောက်သောအခွင့်ကို ငါရနိုင်ကောင်းလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် အသေခံတော်မူသည် နည်းတူ၊ ငါသည်လည်း အသေခံ၍…….” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဧဖက် ၁း၁၉-၂၀ တွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ယုံကြည်သောငါတို့၌ ပြတော်မူသော အလွန်ကြီး လှစွာသော တန်ခိုးတော်ကား အဘယ်မျှလောက် ကြီးသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည် သိစေခြင်းငှါ၊ သင်တို့၏ဥာဏ် မျက်စိကို လင်းစေပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပဌနာပြု၏။ ထိုတန်ခိုးတော်ကား၊ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူ၍ ခရစ်တော်၌ ပြုပြင်သော မဟာတန်ခိုးအာနုဘော်အရှိန်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ …..” ဟုရေးသားထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် သင်၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်သူ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် သင်သည်လည်း ထိုသခင်နှင့် အတူဘ၀ဟောင်းသေပြီး အသက်တာသစ် (ဘ၀သစ်) ကိုလျှောက်လှမ်းသောသူဖြစ်ရပေမည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၂ ၏ အဆုံးတွင် “. . . ထိုအကျိုးကို ကိုင်မိခြင်းငှါ ငါပြေး၍လိုက်သေး၏” . အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အပြေးသမား တစ်ယောက်သည် (၁)ဇွဲ ရှိစွာပြေးခြင်း (၂)ပန်းတိုင်ကိုအာရုံစူးစိုက်ထားရှိခြင်း (၃) နောက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အရာများကိုထားခဲ့ (သို့) မေ့ ထားခြင်း (၄) ရှေ့သို့ပြေးခြင်း စသည်တို့ကိုလိုအပ်သည်။ မိတ်ဆွေ ပုံမှန် ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်လည်း အပြေးပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော အပြေးသမား တစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ နိဂုံး
This entry was posted on January 7, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Thawngno and tagged Thawngno.	Shortlink